Uma unesithakazelo ekuhambeni okuthakazelisayo, iziphepho zemizwelo nokubukwa okungazilibaleki, kufanele nakanjani uye eNepal - izwe eliyisipharadesi langempela labalandeli be-rafting. Kuzo izivakashi ezifuna ukubhekana nezimo ezimbi kakhulu, zijabulele umoya ohlanzekile wezintaba, zijwayele imihlaba emangalisayo ye-Himalayas kanye nemvelo enhle yezwe, ukuzulazula eNepal kuyinto engokoqobo yokuthola.
Izici ze-rafting yama-Nepal
Muva nje iNepal isiye enye yezindawo ezikhangayo kunazo zonke zamaRafting phakathi kwamazwe ase-Asia ngenxa yokuzikhethela kwemigwaqo, isimo sezulu esishisayo, izindawo ezithakazelisayo zezintaba nemifula efudumele. Yilokho okumele izivakashi zikwazi, ukuya kuleli zwe ngemisebenzi yangaphandle:
Ukugxila "emanzini amhlophe" kufanelwe ukuthandwa okukhethekile. Kusho i-alloy kwi-raft inflatable noma kwi-kayaks eduze nenkambo yomfula ogijima. Ukuqala kokuzalwa okunjalo kwenziwa ngo-1990.
Ukuxhunyaniswa kwamazinga ahlukene okubunzima kuyatholakala emifuleni yezwe.
Ukuphepha. Bonke abasha baqeqeshwa, futhi ku-raft ngayinye yabahlanganyeli be-raft ihambisana nomfundisi onolwazi. Ukuze uthole i-raft noma iqembu lama-rafts, ama-kayaks kumele ahambe.
Ingubo. Njengoba ubude be-alloy buhluka emahoreni ambalwa kuya emavikini ambalwa, bonke abahlanganyeli ekuvakashelweni kwe-rafting kusayithi bathola imishini edingekayo, ngokuyinhloko izigqoko zokuphila nezigqoko.
Ngokwezikhwepha zemifula, i-rafting yendawo inezinkinga zayo eziyinkimbinkimbi, okulinganiselwa ku-6-point point:
Izinga lika-1-2 lulukhuni lilungele ukuphumula komkhaya;
I-Level 3 ibhekwa njenge-rafting ethakazelisayo ngaphandle kwengozi empilweni, ikhethwe ngabadlali abanolwazi nabaqalayo abayingozi;
Izinga lezinkinga ezine lilungele kakhulu izivakashi ezifuna ukuzwa ukugijima kwe-adrenaline;
Izinga le-5-6 lenzelwe abathandi abanolwazi futhi abanesibindi sokuvakasha kwezemidlalo.
Isikhathi esingcono kakhulu sokuhlela u-rafting eNepal?
Isimo sezulu sezwe sinqunywa ngokuyinhloko, esukela ngoJuni kuya kuSeptemba. Kuhambisana nemimoya, kunezimvula ezinkulu, eziphakamisa kakhulu amanzi emifuleni. Lesi sikhathi asihambisani ne-rafting eNepal. Isikhathi esihle kakhulu sokuthi u-rafting sisuka ku-Okthoba kuya kuNovemba, lapho kudlula i-monsoon, futhi nxazonke kuyo yonke into eluhlaza futhi imifula igcwele umsindo.
Kuze kube phakathi phakathi nobusika (ngasekupheleni kukaDisemba - ekuqaleni kukaFebruwari) eNepal kubanda kakhulu, kodwa cishe akukho mvula, futhi izinga lemifula liphansi kakhulu. I-Rafting ingahle ihlelwe phakathi nalesi sikhathi, kodwa udinga ukuthatha izikhwama ezingenanzi amanzi nezembatho ezifudumele nawe, ngoba amanzi emifuleni abanda. Ungaya e-rafting nasekuseni (ngasekupheleni kukaFebruwari - ekuqaleni kuka-Ephreli). Ukunciphisa okuncane kwamanzi emanzini kungabangela ukuqhuma, okuncipha kakhulu ukubonakala. Imvula ngezikhathi ezithile.
Izindawo ezidumile zamanzi
Abavakashi abahlela ukuhamba ngomkhaya othakazelisayo emanzini noma befisa ukuzwa konke okujabulisayo kwe-Nepalese rafting, ama-ejenti okuhamba asendaweni anikeza ama-alloy amafushane. Bayafaneleka kakhulu kulabo abangenayo isikhathi esanele. Ubude be-alloy encane livela ezinsukwini ezingu-1 kuya kwezingu-3.
Okuthandwa kakhulu yi-rafting emikhawulweni yomfula iTurusili 3-4 yinkimbinkimbi. Ukuhamba kweminyango yalo mfula i-mountain kuzokwenza izinto eziningi ezingalindelekile, futhi ngokucela izivakashi, i-rafting ingahlanganiswa ne-excursion ku -Chitwan National Park . Ukukhetha okuhle kakhulu kwabaqalayo kuyoba yi-rafting emfuleni ofudumele nolungileyo weNet. Ukuhlehliswa kuyo, okungafani nezinga lezinkinga ezingu-2-3, kuzokuvumela ukuba ujabulele ukuthula futhi uhloniphe indawo enhle kakhulu.
Izinsuku eziningi zokuthungatha imifula emifuleni yaseNepal yindawo eyingqayizivele yokujwayela izindawo ezikude zezwe, ukuphonsa emanzini amhlophe nokunethezeka emabhishi angasolwandle. Phakathi kwenqwaba yemizila, izivakashi zivame ukhethe lezo zivakashi ezinjengezinsuku eziningi njenge:
i-alloy emfuleni waseKalali , okuyindlela emide kunazo zonke eNepal. Uhambo luvame ukuthatha izinsuku ezingaphezu kwezingu-7 futhi luhlukaniswa amazinga angu-4-5 obunzima. Ukuxhuma emfuleni iKalali kuhlangene nokuhlola ama-canyons nokuhamba okulula;
ukujikijela emfuleni iSan Cauchy , okubhekwa njengomnikazi werekhodi ngenani lezinsuku zokurhola kabusha futhi kufakwe emifuleni yezwe eyishumi ephezulu ye-rafting yakudala. Ngokwesilinganiso sezinsuku ezingu-10, izivakashi ziwela i-270 km. Izinga lobunzima be-rafting kulo mfula ngamaphuzu angu-4-5;
ukujikijela emfuleni iKali-Gandaki , okuyizingalo zawo ezithatha indawo esikhundleni, okuheha abalandeli ukuba banakekele izinzwa. Ukuxhuma emfuleni ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingu-6-7 futhi kubonakala amazinga obunzima obuyi-5-6;
ukujikijela eMfuleni waseMarshaangdi - abahlonipha ngokugcwele futhi abazama ukuvakasha okwedlulele emanzini. Ukuguqulwa kobuchwepheshe bezintaba ze-mountain rapids kanye nobunzima obungama-5-6 obunzima bokuzikhandla kwe-rafting kuzovumela ukuthi kutholakale ukunyakaza okuhle kwe-adrenaline. Ukuvakasha kuthatha cishe izinsuku ezingu-5;
ukujikijela eceleni koMfula iTamur , ozohlinzeka cishe ngamakhilomitha angu-120 amanzi anesiphepho kanye ne-rapids engaphezu kuka-100 ephefumulayo, ikuvumela ukuthi ubone indawo eyikude futhi ehlaba umxhwele ebuhleni bayo obude entshonalanga yeNepal. Inkimbinkimbi ye-rafting enjalo inqunywa ngamaphuzu angu-4-5, kuthatha cishe izinsuku ezingu-10.
Kungakhathaliseki ukuthi i-rafting ihlelwe yizivakashi, udinga ukuqoqa kahle ukuze uzizwe ukhululekile. Umthetho oyisisekelo: ngokwawo kufanele ube njengento encane ngangokunokwenzeka, konke okudingekayo kuphela. Kuhle kakhulu ngama-alloys, izinto ezilula futhi ezisheshayo: ama-shorts, i-pair of T-shirts (enezandla ezincane nezindebe), i-suit yokugeza. Ukuhamba nokupaka udinga i-sweater, i-tracksuit namasokisi. Esikhathini sasebusika nge-must necessarily be wetsuit. Kusukela ezicathulweni kungcono ukhethe izimbadada noma amasinki, kanye nokushintsha izicathulo ze halters. Ngaphezu kwalokho, udinga ukubeka imali kwimithi, i-flashlight, izinto zokuhlanzeka komuntu siqu, i-sunscreen kanye nezibuko, isikhwama sezindebe zokuhlanzeka, i-flashlight.
Yini ongayibona eSingapore ezinsukwini ezimbili?
Yini ongayibona eCambodia?
Yeka ukuthi kuyabiza kangakanani ukushayela eSingapore?
Ezokuthutha eNingizimu Korea
Ukukhula kanye neminye imigomo kaJackie Chan
Amaqanda aqhephukile - amakholori
I-seborrheic dermatitis ezinsaneni
Isixazululo sokusicashunwa kokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa
Ngidinga i-visa eTurkey?
Ingubo eboshiwe - ukukhethwa kwezithombe zamamodeli enhle kakhulu kule nkathi
I-bee impova - izindlela zokupheka ezingcono kanye nemfihlo yokusetshenziswa
INdlovukazi yaseNorway eNorway eneminyaka engu-80 yahamba yaya ehlathini nabafuduki
Ikhekhe le-carrot - iresiphi
Ungathatha kanjani uFlucostat?
30 zezinwele zangaphakathi ezinhle kakhulu
Ukuzivocavoca kwama-fingering evesini
Igazi elivela ekhanda
15 "izimangazane" ezingenakuqhathaniswa emafilimu ongazange wazi nge!
I-Photoshoot namahhashi ebusika
Indlela yokubamba umyeni ngokuhlukunyezwa?
Ithoyizi Yonyaka Omusha ngezandla zakho enkulisa